Akeeka kaayyoo Diinaa, Gantoota fi Shira Alagaatin ABO Hin Diigamu – Rabira News
Akeeka kaayyoo diinaa, gantoota fi shira alagaatin ABO hin diigamu !
Ibsa Miseensota ABO Godina Shaggar irraa kenname
Akkuma Adunyaanu beektu ABO qabsoo Uummannii Oromoo keessattu wareegama Qeerroon bilisummaa Oromoo kumaatamni itti dhumaanin, dhibbaatamni qaama itti hir’ataniin hoogganni ABO gara biyyaatti deebihuun qabsoo Karaa nagaa akkaata Heerri fi seerri biyya kanaa jedhu kabajuun, fedhii qabsoo Uummannii Oromoo gaggeessa ture fi itti jiru giddu galeessa gochun Uummataa keessa jiraacha Uummataan Uummataaf ABO kan hojjeecha ture fi jiru dha.
Daandii qabsoo karaa nagaa biyyi tun gaggeessa jirtu keessas tokko filannoo dha. ABO’s filannoo kana irraatti hirmaachuf Ulaagaleewwan boordii filannoo biyyooleessa dambii fi tumaalee seeraa gaafatu hunda guute galma’un, golee Oromiyaa baay’eetti miseensoota horachuu hanga waajjiralee Sadarka gara garatti banaacha tureera.
Garuu, dhiibbaa PPn geesisaa jiruun Waajjiraaleen ABO waajjira ABO gidduu galessaa Gullallee dabalatee guutummaa Oromiyaatti cufameera.
Hogganoonni, Qondaalotaa fi deggartoonni ABO mana hidhaa keessatti seeraan ala dararamaa jiru.
Akkasumas tahe ABO Uummannii filannoon nagaa bilisa, dimookiratawaa fi hunda hirmaachisa ta’e akka gaggeeffamu qaama dhimmi ilaallatu waliin kan hojjeecha turen nutis Miseensonni ABO Godina Shaggar Akeeka fi sagantaa ABO bu’uuraa godhachun dirqama dhaaba kan hojjeecha jirru thus, PPn sodaa deemsa dimokiraasii irraa qabduun ABO irratti dhiibbaa taasisaa jirtu humnaa ol waan taheef ABOn filannoo biyyollessaa keessatti hirmaachuu akka hin dandeenye ibseera.
Yaa ta’u malee ibsa ABO bitootessa 13/2021 xalayaa gara boordii filannoo biyyooleessatti barreessen waltajjiin seeraan ala fi dhaabni hin beekne waajjira ABO Gullallee keessatti gaggeeffamaa akka jiru hubachiisera.
Nutis Miseensonni ABO Godina Shaggar ibsa ABO baase deeggruun gocha seeraan ala maqaa Kora Sabatin waajjira muummee ABOti gartuu foxxoqinsa umteen Heeraa fi Seera ABOn ala PP jala galuun yaali diigumsa ABO irratti aggamame
balaaleeffachuun ibsa ejjenno akka armaa gadiin baasneerra.
Caasaan, Miseensonni fi Deeggartoonni ABO akka walii galatti hawwaasni keenya burjaajjii akeeka Kaayyoo diinaaf gantoota fi shira alagaatin ABO diiguuf hojjeetamaa jiru akkuma kaleessaa dura dhaabbachun dhaaba keenya ABO akka tikfaannu waamicha ni dhiyeessina.
Kallacha qabsoo bilisummaa Ormoo kan tahe ABO diiguuf ykn dadhabsiisuuf ijibaata gartuun foxxoqinsaa PP jala galtee tattafataa jirtu nuti Miseensonni ABO Godina Shaggar ni mormina duras ni dhaabbanna.
Sirna dhablummaan dhaaba irraa foxxoqanii hirbuu qabsaawota diiganii ergama diinaa fudhatanii fira qabsoo fakkaatanii imimaan naachaa bohaa shira shiranii, kaayyoo gootonni irratti waregaman gara dabarsuuf yaalii gantoonni taasisan qabsoo qabsawotaan hirmaannaa Uummata keenyaan ni fashala.
Gantuu fi dinni yeroo yrrootti ABO irratti yoo kaate illee akkuma yeroo darbetti Kaayyoon ABO qabsaawota bilisummaan eegamaa qabsoon bilisummaa diina waliin taasifama jiru itti fufaa, gochaa gantootaas dura dhabbachaa qabsoo bilisummaa Oromoo Hirbuu gootowwan shiniggaa bilisummaan gahuuf murannoon ni qabsoofna.
Hawwaasni keenya qeerroon bilisummaa Oromoo gochaa gantootaaf otoo hin rifatiin qabsoo kee jabeffachuun ABO waliin bilisummaa fi mirga hiree murteffannaa kee galmaan gahuuf yoomuu caalatti akka qabsoo keessatti hirmaattu waamicha qabsoo bilisummaa Oromoo Oromoota golee Oromiyaa keessaa fi Oromoo biyya Ambaa jirtaniif ni dhiyeesina.
Qabsoon bilisummaa gochaan madaalama, gantuun afaaniin fira gochaan akka ilmoo re’ee, Oromoo fakkaattee Oromoo gabrummaa jalatti ittisuuf kachachalaa jirtu siicoo seenaa waan taateef Oromoo fi kanneen quqama mirga dhala namaa qaban hunda birratti gochaan kee saaxilameera fudhatamas hin qabdu. Gochaa abaramaa kanaan kanneen durgoof gowwomtanii kora sabaa gantoota irratti argamtan, qabsoo dhiigaa fi lafee Qabsawotaan ijaramuun sirna ittiin korri sabaa tahu isa lafee qabsaawota
Oromoon ijaaramee dhaloota kana bira gahe dhiituun shira gantuun fi diinaan shirame keessaa baatani qabsoo saba keessanitti gufuu tahuu irraa akka off baraartan waamicha keenya isiniif dhiyeesina.
Nuti Miseensonni ABO Godina Shaggar Karaan qabsoo bilisummaa bu’i bahiin itti heddumaattus kaayyoo qabsaawwonni hangaftoonni keenya irratti waregaman galama bilisummaan gahuuf kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ABO waliin itti fufnna.
Injifannoo Uummata Bal’aaf !
Miseensota ABO Godina Shaggar
Bitootessa 16/ 2021
Previous Obbo Qajeelaa Mardaasaa: ABOn sababa waldhabdee keessootiin qophii filannoo waan hin taasisneef yeroon kaadhimtootaa dhiyeessu akka dheeratuuf gaaffii dhiyeessera jedhan Hoogganaan sab-qunnamtii ABO
Next Seena Jeneraal Damissee Bultoo